खबरदार ! नारीको रगतमा होली खेल्न पाइदैन - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
- संम्झना पौडेल
के यो संविधानमा नारीको जीवनमा पुरुषले मोजमस्ती गर्न पाउने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ ? गरेको छैन भने, यो संविधानमा नारीको रगतमा होली खेल्ने पुरुषहरुलाई किन आजीवन जेल सजाय हुदैन भनेर लेखिएन ? केही दिन अघीको कुरा, कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका १० चन्द्रौटा प्रगति टोल बस्ने शोभाखर अधिकारी की ६ वर्षिया छोरी सीता अधिकारी को बलात्कार पछि शव फेला पर्यो । घरमा खेल्दै गरेको अवस्था पछि हराएकी उनको शब खोलामा गाडिएको अवस्थामा फेला परको थियो । रमाउने हाँस्ने खेल गर्ने उमेरकि ती बालिकालाई त्यस्तो पाप गर्ने दानव पशुलाई पशुको दर्जा पनि पाउन लायक छैन । हो यस्ता धेरै घटनाहरु छन जहाँ म जस्तै मेरा दिदी बहिनीहरुको अस्मिता र प्राण हत्या भैरहेको छ ।
आज बिहान पत्रिका पढ्दै थिए समाचारमा थियो, नवलपरासी – पक्लिहवा ९ सकरविनहीका मिनु मुसहरले आगो लगाएर पत्नीको हत्या छन् । उनले शनिबार राती ३३ बर्षीया पत्नी नदेरु मुसहरलाई शरिरमा मट्टितेल खन्याएर आगो झोसेका थिए । जलेर घाइते अवस्थाकी नदेरुको उपचारका क्रममा लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा आइतबार मृत्यु भएको हो । यस्ता घटनाहरु सुन्दा मन धरधरी रुन्छ । मुटु पोल्छ ।
के यो संविधानमा नारीको जीवनमा पुरुषले मोजमस्ती गर्ने पाउने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ ? गरेको छैन भने, यो संविधानमा नारीको रगतमा होली खेल्ने पुरुषहरुलाई किन आजीवन जेल सजाय हुदैन भनेर लेखिएन ?
मानिस सर्वाधिकार होइन, किनभने हामीभन्दा माथी कानुन छ । कानुन सवैले पालना गर्नु पर्दछ । कोही कसैले कानुनलाई हातमा लिन खोज्यो भने त्यो अपराध हो । यदि अपराधीलाई राज्यले कानूनी कठघरामा उभ्याउन कडाईकासाथ तत्परा नदेखाउने हो भने राज्य नै अपराधीको नियन्त्रणमा पुगेको ठानिनेछ । अपराध अपराधीको सूची अनि कडा भन्दा कडा कारबाहीको कुरा गर्दा महिलामाथिको हिंसा पर्दछ । अझ बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका दोषीलाई किन सजायको अन्तिम बिन्दुसम्मै पुर्याउन सकिदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ? नारीमाथि किन यस्तो अमानविय ब्यवहार गरिन्छ ? हजारौंको बलिदान र लाखौंको जीवन अङ्गभङ्ग गरी देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र आयो ।
हुदाँ हुदाँ जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिको हातले लेखेको विश्वको सर्वोकृष्ट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान आयो । के यो संविधानमा नारीको जीवनमा पुरुषले मोजमस्ती गर्ने पाउने मौलिक अधिकारको प्रत्यभूति गरेको छ ? गरेको छैन भने, यो संविधानमा नारीको रगतमा होली खेल्ने पुरुषहरुलाई किन आजीवन जेल सजाए हुदैन र लेखिदैन ? शासक फेरिएका छैनन् ।
त्यसैले एक्काईसौं शताब्दीमा आएर पनि नारीहरु पुरुषको दास बन्नु परेको छ । जसको एउटा उदाहरण पोहोरकै घटना हेर्ने हो भने कपिलवस्तुको शिवराजनगरपालिका नौडिहवाकी बोल्न नसक्ने महिलामाथि भएको सामूहिक बलात्कार ।एउटा अध्याँरो कुनामा बसोवास गरेको एक अनपढ पुरुषले यस्तो काम गरे पनि सहजै स्वीकार गर्ने सकिने थियो तर त्यो पनि रहेन । नागरिकहरुको जीउधनको रक्षा गरी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, अपराधीलाई कानुनको भागेदारी बनाई सभ्य समाज निर्माण गरी राष्ट्र, राष्ट्रियता कायम राख्ने निकायका सदस्यबाट त्यस्तो भएको थियो ।
कुनै एकजना नियत विग्रिएको प्रहरीमात्र भए पनि यो घटना स्वाभाविक मानिने थियो तर दश–दश जना नवजवान सशस्त्र प्रहरीबाट बलात्कृत हुनु कल्पना बाहिरको कुरा थियो । त्यस्तै काभ्रे पाँचखाल नगरपालिका –११ तत्कालीन बालुवा गाविस घर भएकी १८ वर्षीया युवतीलाई नातेदार दलालहरुले २०७१ साल वैशाख २० गते घरबाटै ललाई फकाई भारतको दिल्लीमा लगेर विक्री गरेको घटना ।
यी प्रतिनिधिमलक घटना मात्र हुन । हाम्रो समाजमा यस्ता घटनाहरु अनगिन्ती छन । जो मनभरी गुम्सिएर रहेका छन । ती सवै घटनाहरु एकदिन अवश्य बाहिर आउने छन । यता–यस्तै अनेक घटना घटिरहेका छन् र घटिरहन्छन्। अब यो रोकिनुपर्छ । देश परिवर्तन भएको छ । देशमा जनताले बनाएको संविधान छ । महिला हिंसा गर्नेहरुलाई सोही अनुसार कारवाही गरी पीडितहरुको घाउँमा मलहमपट्टी लगाई उनीहरुलाई राज्यले दीर्घकालीन आधारभूत आवश्यताको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । पीडितको मनोवल उच्च राख्न राज्य तयार हुनुपर्दछ । हैन, यसलाई कडाई नगरी अव आउने दिनमा यस्तै घटना दोहोरी रहने हो भने घर–घरबाट नारी आक्रोशको ज्वाला निस्कने छ । त्यो ज्वालाले क कसलाई भष्म गर्नेछ पत्तो छैन । त्यो ज्वाला मुलुकको वास्तविक क्रान्ति हुनेछ ।